Mourinho oo si faahfaahsan uga hadlay saxiixiisa cusub ee Paul Pogba – Kismaayo24 News Agency
by admin 10th August 2016 10th August 2016 083
Tababaraha Manchester United ee Jose Mourinho ayaa markii ay kooxdiisu saxaafada u soo badhigaysay heshiiska Paul Pogaba uga faa’iidaystay in uu markale weerar ku qaado tababarayaasha horyaalka Ingiriiska oo ay ugu horeeyaaan Arsene Wenger iyo Jurgen Kloppp oo hore u sheegay in 100 milyan oo ciyaartoy lagula soo wareegaa ay tahay wax qalad ah.
Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa hore u sheegay in ayna isaga suurtogal ka ahayn in uu ciyaartoy kula soo wareego lacag gaadhaysa 100 milyan wuxuuna sheegay in dhibta ugu wayni ay dhici karto marka uu ciyaartoyga boqolka milyan ah uu dhawac soo gaadho. Sidoo kale Wenger ayaa arintan ku tilmaamay mid waali ah.
Mourinho oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Anigu waan ogahay dooda, waanan fahmayaa taas, mararka qaar kubbada caga waxyaabo ayaa ka dhaca, waxayna kooxdu jabisaa rekoodho, laakiin tani waxay suurtogal u tahay kaliya kooxaha Man United oo kale ah”. Ayuu Mourinho sheegay isaga oo tabababarayaasha kale ugu faanaya in uu joog koox ka wayn kooxaha ay maamulaaan.
Mourinho ayaa oo hadalkiisa sii wata ayaa u jawaabay Klopp, Wenger iyo dadka qaladka u arkayay lacagta waalida ah ee ay Man United kula soo wareegtay Pogba wuxuuna yidhi: “Anigu markii aan hadalada qaarkood maqlay iyo tababarayaasha qaar oo taas(heshiiska Pogba) eedaynaya, anigu ma filayaayo in ay waligood dhibaato arkeen, sababtoo ah si aad dhibaato u aragto waxaad u baahan tahay in aad joogto kooxaha ugu sareeya aduunka. Sidaa daraadeed Man United way ka dhici kartaa”.
Intaa kadib Mourinho ayaa luuqadii dagaalka ahayd u badalay amaan uu ugu kala dul dhacay Paul Pogba wuxuuna yidhi: “Pogba waa ciyaartoy aad u da’yar, waa ciyaartoy khadka dhexe ah oo aan la rumaysan karin oo leh awooda jidh ahaaneed, laakiin isla mar ahaantaa waxa uu leeyahay isku xidhkii, xirfadii iyo in uu wax walba la qabsan karo”.
Mourinho oo sii amaanaya 23 jirkan ree France ayaa yidhi: ” Pogba waa wax walba. Waxa ay tahay in uu hadda barto ayaa ah in uu anaga nala ciyaaro, sababtoo ah anigu waxaan markasta sheegaa in kubbada cagta aad ku noqon karto ciyartoy heer sare ah sida isaga oo kale. Laakiin kooxi waa koox, waxaanad u baahan tahay in aad barato sida kooxda looga ciyaaro waxayna kooxdu u baahan tahay in ay barato sida ay adiga kuula ciyaarayso”.
Mourinho ayaa sheegay in uu doonayo sidii uu Pogba uga soo saari lahaa waxa ugu fiican ee uu awood isla markaana uu ilalin doono wuxuuna yidhi: “Waxaanu u baahanahay in aanu Pogba ka soo saarno waxa ugu fiican, kani waa hanaan, sidaa daraadeed haddii uu u baahdo in la ilaaliyo waxaan halkan u joogaa in aan ilaaliyo”.
Tababare Mourinho ayaa haddaba ka sii afeef dhigtay in ayna dadku qalad fahmin imaatinka Pogba isla markaana ayna filan in kubbada ugu horaysa ee uu taabto uu gool ku dhalin doono wuxuuna yidhi: “Waxaan ogahay in dadka qaar ay ka fikirayaan in imaatinka halkan ee Pogba uu taabashada ugu horaysa ee kubbada uu gool ku dhalin doono, laakiin anigu waxaan halkan u joogaa in aan isaga ilaaliyo oo aan siiyo xaalada ugu fiican ee aanu filayno in uu noqdo oo ah ciyaartoy Man United ah oo ah tixraax kooxda u ah. Anigu aad ayaan u faraxsanahay”.
Ruushka oo ka danbeyay Fashilinta Inqilaabki Milatary ee Turkiga ka dhacay.
Ciidamadda Itoobiya oo ka Baxay Qeybo ka Mid ah Gal-gaduud